चार सेट नाइजेरिया मा ठूलो टन्ज इंजेक्शन प्रेस मेशिन - निB्गो जिआंगडONG्ग हाइसन मेकानरी सीओ।, लि..
घर » समाचार » प्रदर्शनहरू
चार सेट नाइजेरिया मा ठूलो टन्ज इंजेक्शन प्रेस मेशिन
समय: 2018-12-27 हिट्स:
यो आज हाम्रो कामदारहरूको लागि व्यस्त छ. यो लगभग एक दिन समय लाग्यो यी सबै चार सेट ठूलो टन इंजेक्शन प्रेस मेसिन लोड गर्न. यी ठूला टन मेशिनहरु छन् 1 set of 830 टन, 1 630ton को को सेट��,2sets of 1100 टन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु. यो अनुमान गरिएको छ कि समुद्र मा एक महिना पछि, यी चार इंजेक्शन मशीनहरु अन्तिम गन्तव्य नाइजीरिया मा आउनेछन्.
दस बर्ष पहिले, हामी एक राम्रो ग्राहक जो हाम्रो प्लास्टिक मेसिनरी नियमित रूप बाट किन्नुभयो. यो सेप्टेम्बर मा, उहाँले हामीलाई उहाँको कारखाना भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्नुभयो किनभने उहाँ प्लास्टिक इंजेक्शन व्यापार को लागी नयाँ प्लान्ट छ. यसबाहेक, उसले हामीलाई आफ्नो एक साथीको परिचय गरायो. उनको साथी प्लास्टिक उद्योग मा इंजेक्शन मोल्डिंग व्यवसाय को लागी स्थानीय मा प्रसिद्ध छ. त्यसोभए ईन्जिनियरहरु संग हाम्रो बिक्री टीम नाइजीरिया मा उनीहरु लाई भेटीयो र एक ठूलो आदेश फिर्ता ल्याईयो.
हामी विश्वास गर्छौं यदि तपाइँ ग्राहकहरु लाई राम्रो गुणस्तर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु आपूर्ति, ग्राहकहरु हामीलाई आफ्नो साथीहरु लाई परिचय गराउन को लागी तयार हुनेछन्. हामी धेरै इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन ग्राहकहरु बाट आदेश पाएका छौं’ साथीहरु.
यो समय, यो पुरा तरिकाले छ 40HQ कन्टेनर लिन्छ.
630Ton प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को इकाई clamping
630Ton इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन कन्टेनर मा लोड को इकाइहरु clamping
830Ton इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु को इंजेक्शन इकाई लोड हुँदैछ
को क्लैम्पिंग एकाई 830 काठ को फूस संग इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु
को क्लैम्पिंग एकाई 1100 टन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु
को clamping इकाई को आधार 1100 टन प्लास्टिक इंजेक्शन मिसिनहरु
1100 सर्वो ड्राइभ र सर्वो पम्प संग प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिनहरु
को इंजेक्शन एकाइ 1100 टन प्लास्टिक इंजेक्शन मिसिनहरु
अघिल्लो : 1 सेट 680 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू मलेसियामा पुर्‍याइयो